Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay oo loogu baaqay inuu soo farageliyo khilaafka ka jira Wabiga Niile - Jowhar somali news leader
Wasiirada Arrimaha Dibada ee wadamada carabta ayaa taageeray baaqyada loo jeedinayo golaha amaanka ee qaramada midoobay inuu soo fara galiyo muranka mudada dheer ka jiray biyo xireenka weyn ee ay itoobiya ka sameysay wabiga buluuga ah, oo ka mid ah wabiyada waaweyn ee wabiga Nile.
Xoghayaha Guud ee Jaamacadda Carabta Axmed Aboul Gheit ayaa baaqan kaga dhawaaqay kadib kulan Talaadadii ka dhacay Qadar.
Aboul Gheit ayaa kadib shirkan oo ay ka qeybgaleen 17 wasiir arrimo dibadeed ee carbeed, wuxuu ku tilmaamay amniga biyaha ee Masar iyo Suudaan inay yihiin qayb muhiim ah oo ka tirsan amniga qaranka carabta.
“Waxaan ka wada hadalnay wadaxaajoodka ku saabsan biyo xireenka Itoobiya si loo gaaro heshiis cadaalad u ah dhammaan dhinacyada ay khuseyso,” ayuu yiri Wasiirka Arimaha Dibada ee Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
“Waxaan sidoo kale ka wada hadalnay in aan la qaadan wax go’aanno keli ah oo waxyeello u geysanaya waddan xubin ka ah,” ayuu raaciyay, isaga oo si muuqata ula jeeday qorshaha Itoobiya ee ah in la dhammaystiro wejiga labaad ee buuxinta biyo-xireenka xilli-roobaadka.
Labada dal ee Masar iyo Sudan waxay hore ugu baaqeen Mareykanka, Midowga Yurub iyo UN inay ku soo biiraan wadahadalada iyagoo dhexdhexaadiyayaal ah oo ay la socdaan AU, taasoo horseedeysa dadaallada lagu doonayo in heshiis lagu gaaro. Itoobiya way diidday soo jeedintaas.